I-GIS Software Alternatives - Geofumed
Disemba, 2007 Cadcorp, Geospatial - GIS, I-GvSIG, uDig
Njengamanje sibhekene ne-boom phakathi kobuchwepheshe abaningi kanye nemikhiqizo yohlelo lwazo lwama-geographic information olunokwenzeka, kulolu hlu, oluhlukaniswe uhlobo lwelayisense. Ngamunye wabo unesixhumanisi sekhasi lapho ungathola khona ulwazi oluthe xaxa:Isofthiwe yezohwebo, noma okungenani ngelayisensi engeyona ihhala
ArcGIS (Umholi wezwe kuzinhlelo ze-GIS)
I-Autodesk Map (Umholi wezwe kuzinhlelo ze-CAD)
I-MicroStation Geographics (manje i-Bentley Map)
Isofthiwe yamahhalangokuvamile hhayi ethandwa kakhulunakuba eziningi zazo zinamandla noma zingcono kunama-non-free.
Amathuluzi weMephu ejwayelekile (GMT)
Okungenani i-14 yalezi zicelo isebenza ku-Mac, noma i-Java ne-17 zigijima ku-Linux. Sesanda kufanisa, lapha ungabona okunye:
Mhlawumbe sesizwe okuthile kusuka ku-ArcGIS, Geomedia, Mapinfo, Manifold, Grass, GvSig ... nakuba cishe sonke sibonile imibono ehlakazekile kumaforamu amaningi, kungenzeka ukuthi ukuqhathaniswa okugxile kubo bonke kulahlekile. Ingabe kukhona imibono mayelana nabanye ofuna ukwabelana nabo? Futhi kulokhu ikhasi le-wikipedia ukuqhathaniswa kuboniswa ngesimo se-tabular
Thumela Previous«Langaphambilini Xhuma kwi-Globe ye-Digital nge-Mapinfo, imephu ye-Autodesk ne-Arcmap
Post Next Mayelana nePaperspaceOlandelayo "
Izimpendulo ze-3 ku "GIS Software Alternatives"
Maria Vine uthi:
Ezinye izindlela zihlale zihle. I-softwares yezohwebo idinga ukutshalwa kwezimali okuningi futhi ngokuvamile yenza izinto eziningi esingayifinyelela nge-soft soft.
Siyabonga ngokubheka uSanti, ngivele ngikwenzile ukufakwa.
Ushiye i-GIS evamile kakhulu e-England, eJapane, e-Australia nase-USA ... engaziwa kwamanye amazwe kodwa ngokubanzi kunabasebenzisi abaningi.
Yisiteji se-GIS esifunda amafomethi amaningi natively (ngaphandle kwesidingo sokungenisa), kanye nomlingani ophelele ukuhlasela noma yiluphi uhlobo lwe-database.